Hafatra maika an'ny CDC ho an'ny Amerikanina vita vaksiny: The Booster Shot
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Hafatra maika an'ny CDC ho an'ny Amerikanina vita vaksiny: The Booster Shot
Vaovao momba ny fahasalamana • LGBTQ • Vaovao • Etazonia Vaovao Vaovao
Oktobra 16, 2021
Olona 14 tapitrisa any Etazonia izay nahazo ny vaksininy Johnson sy Johnson no nahatsiaro hadino sy tao aoriany. Androany dia mety niova izany tamin'ny alàlan'ny tolo-kevitry ny booster shot nandritra ny 18 taona mahery.
CDC, Ny Foibe Fanaraha-maso sy Fikorohana ny Aretina tany Etazonia dia namoaka torolàlana tena izy ho an'ny Amerikanina ary hafatra maika raha tokony hotifirina ny booster fahatelo 3 herinandro lasa izay
Zava-dehibe ny mahatakatra ny fatra voalohany sy faharoa amin'ny vaksinin'ny COVID-19 alohan'ny zava-bita rehetra
Androany ny tontolon'ny manampahaizana ivelany tamin'ny zoma dia nanoro hevitra ny Food and Drug Administration mba hanome alalana ny doka fanentanana ho an'ny vaksinin'ny coronavirus Johnson & Johnson ho an'ny olona 18 taona no ho miakatra.
Ny sampan-draharahan'ny fahasalamana any Etazonia-50 dia mamorona ny fampahalalana momba azy sy ny tolo-kevitra avy aminy, izay mahatonga ny olana manontolo ho sarotra ary indraindray mampikorontana
Ny vaksiny voalohany an'ny COVID-19 an'ny Pfizer sy Moderna dia manome fiarovana tsara amin'ny soritr'aretina, hopitaly ary fahafatesana. Ny fatra voalohany sy faharoa amin'ny vaksinina dia tokony hatao loha laharana amin'ny fatra mampisondrotra. Ny fomba tsara indrindra hiarovana ny ankohonana sy ny vondrom-piarahamonina dia ny fiantohana ireo mponina tsy vita vaksiny hamita ny andiany vaksiny voalohany.
Ny tifitra booster an'ny Pfizer dia atolotra ho an'ny vondrona laharam-pahamehana manokana mba hampitombo ny valin'ny fiarovan-tena amin'ny COVID-19 ary hanome fiarovana amin'ny aretina, anisan'izany ny Delta variant.
Fa maninona no tokony handinika booster ianao?
Ny vaksinin'ny COVID-19 dia mijanona ho fitaovana mahomby indrindra hisorohana ny aretina mafy, ny fampidirana hopitaly ary ny fahafatesana, ao anatin'izany ny fiarovana amin'ireo karazana Delta miely be.
Na izany aza, ny fanadihadiana navoakan'ny Centres for Disease Control and Prevention (CDC) dia mampiseho fa rehefa vita vaksiny tanteraka, dia mihena ny fiarovana amin'ny viriosy izay miteraka COVID-19 ary mihena kely kokoa ny fiarovana amin'ny karazana Delta.
Iza no tokony hahazo booster shot?
Ny olona sasany dia atahorana hihombo na harary mafy amin'ny COVID-19 noho ny taonany, ny toe-pahasalamany, na noho izy ireo miaina na miasa akaiky ny hafa izay mametraka azy ireo atahorana hampidirina na halefa.
Ny CDC dia nanoro hevitra mafy ny fanamafisana homena ny olon-dehibe 65 taona no ho miakatra ary ireo 50 taona ka hatramin'ny 64 taona miaraka amin'ny toe-pahasalamany satria ny fihenan'ny tsimatimanota ao amin'ireto vondrona ireto dia atahorana ho voan'ny aretina mafy. Noho izany, ny Departemantan'ny Fahasalamana any amin'ny fanjakana maro dia nanoro hevitra ny hanomezana laharam-pahamehana ireo vondrona ireo.
Raha avela ny famporisihana, ny CDC dia hanome tolo-kevitra ho an'ny vondrona fanampiny, ao anatin'izany ny olon-dehibe 18 ka hatramin'ny 49 taona miaraka amin'ny toe-pahasalamany mifototra amin'ny tombony sy ny loza mety hitranga amin'ny olona tsirairay, ary ny olon-dehibe 18 ka hatramin'ny 64 taona izay atahorana mafy hanana asa na andrim-panjakana. fampahalalana, miankina amin'ny tombony sy ny loza mety hitranga amin'ny olona tsirairay.
Tahaka ny tsy maintsy niandrasan'ny mponina tamim-paharetana ny anjarany rehefa naseho voalohany ny vaksinin'ny COVID-19 dia tokony hasehontsika rehetra aloha ary alao antoka fa ny vondrona voatondro ho laharam-pahamehana dia mahazo ny booster aloha, dia ampahany amin'ny torolàlana omena ny mponina ao amin'ny State of Hawaii.
Ny booster Pfizer dia ho an'ireo izay nahazo vaksinin'ny Pfizer ihany; tsy atolotra ho an'ireo nandray ny vaksinin'ny Moderna na Johnson & Johnson.
Ny vaksinin'ny Moderna sy Johnson & Johnson dia eo am-pandinihina ireo fatra fampiakarana azy ireo ary ireo izay vita vaksinin'ny iray amin'ireo vaksiny ireo dia tokony hiandry mandra-pivoakan'ny FDA sy ny CDC ny tolo-kevitr'izy ireo. Ny dingana voalohany amin'ity tolo-kevitra ity dia efa nofaranana ary miandry ny fampandrenesana ofisialy.
Rahoviana ianao no tokony hahazo booster?
Ny fotoana voatondro ho an'ny fampiroboroboana Pfizer dia enim-bolana aorian'ny nahavitananao ny tifitra roa voalohany nataonao. Ny data avy amin'ny andrana ara-pitsaboana dia nampiseho fa ny tifitra booster Pfizer-BioNTech, izay nekena ho ampiasain'ny Food and Drug Administration, dia mampiseho fa nitombo ny valin'ny hery fiarovan-tena teo amin'ireo mpandray anjara tamin'ny fitsarana izay nahavita ny andiany vaksinin'ny Pfizer indroa nitifitra. teo aloha.
Azo zahana ireto mpandray vaksinin'ny Pfizer-BioNTech manaraka ireto izay nahavita ny andiany voalohany farafahakeliny 19 volana lasa izay ary:
65 taona no ho miakatra
Age 18+ izay mipetraka ao toerana fikarakarana maharitra
Age 18+ izay manana ny aretina
Age 18+ izay miasa ao fikirana atahorana mafy
Age 18+ izay mipetraka ao fikirana atahorana mafy
Misy fanafody antiviral Oselavir® ankehitriny
Fizahan-tany voalohany miompana amin'ny firenena maro, misy mpandray anjara maro...
Tetik'asa fanampiana iThemba Cape Town vaovao an'i Lufthansa ho...
Royal Caribbean 'dia na aiza na aiza' dia nanala...
Nambara ireo mpandresy amin'ny WTM Responsible Tourism Awards
Iraka vaovao hiaro ny tany navoakan'ny NASA sy SpaceX
Ny Holland America's Rotterdam dia $ 4.1 tapitrisa ...
Port Royal amin'ny fandaharam-potoana fitsangantsanganana vaovao ho an'ny Montego Bay
Hiovaova lalao lehibe ny fiverenan'i TUI any Jamaika
Ny Fikarohana Nazi Vaovao dia nanova ny tantara momba ny tsiambaratelo britanika...
Famaha tsotra, azo vinavinaina ary azo ampiharina amin'ny...
Hon. Edmund Bartlett dia manao majika ho an'ny Jamaikana ...